Muxuu Yahay Nidaamka Calaamadaha "Tareenka" SIL? | RayHaber | raillynews
HometareenkaMuxuu yahay Nidaamka Soo-Saarida Wadada Tareenka?
14 / 01 / 2020 tareenka, GUUD, Warqad Hordhac ah
Waa maxay nidaamka soo-jiidashada siligga
Nidaamyada calaamadaha ayaa ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nidaamyada tareenka sida Tramway (SIL2-3), Light Metro iyo Metro (SIL4), halkaasoo “nabadgelyada” lagu gaaro iyadoo la fulinayo habraacyada habboon waqtiga ugu habboon oo la isku halleyn karo. Nidaamyadani waxay bixiyaan farsamo weyn, maamul iyo faa'iidooyin kharash iyo sidoo kale nabadgelyo.
In kasta oo isticmaalka nidaamyada tareenka ee waddankeenu uusan ahayn mid aad u caadi ah illaa 90-meeyadii, haddana waxaan aragnaa in nidaamyada tareenka ay si sii kordheysa u door bideen xallinta dhibaatada taraafikada ee sii kordheysa. Aynu sii wadno maqaalka anagoo sharraxaya fikradaha aasaaska u ah calaamadaha nidaamyada tareenka.
SIL (Heerka Daacadnimada Nabdoon)
Shahaadada SIL waxaa loola jeedaa isku hallaynta nidaamka. Heerka SIL waxaa lagu muujiyey 4-ta aasaas ee aasaasiga ah, iyo markii heerka SIL uu kordhayo, heerka amniga ayaa ku sii kordha iyada oo kakanaanta nidaamka si loo yareeyo khataraha.
SIF (Waxqabadka Qalabka Badbaado)
Hawsha ugu weyn ee loo yaqaan 'SIF' halkan waa in la garto lagana hortago xaalada khatarta ah ee dhici karta inta lagu gudajiro howlaha. Dhamaan howlaha SIF waxay dhisaan SIS (Nidaamka Qalabka Amniga). SIS waa nidaamka kontaroolada ee maamusha nidaamka oo dhan oo nidaamka ka dhiga meel aamin ah xaaladaha khatarta leh.
Ereyga "Hawlaha Badbaadada Shaqadu waxay u taagan tahay yareynta halista ilaa heer la aqbali karo iyadoo la adeegsanayo dhammaan howlaha SIF ee nidaamka.
Joojinta tareenka Automatic (ATS)
Si loo hubiyo nabadgelyo iyo hufnaan tareenka taraafikada ee howlaha tareenka, nidaamyada xakamaynta tareenka kala duwan ayaa la soo saaray qaarkoodna ay yihiin (ATS) joogsi tareen iswada, (ATP) ilaalin tareen otomaatig ah, (ATC) kontarool otomaatig ah.
Nidaamka ATS waa nidaam amni oo awood u siiya joojinta tareenka isagoo xakameynaya xawaaraha tareenka meesha taraafikada lagu xakameeyo calaamadaha korantada iyo sidoo kale digniinta darawalka haddii loo baahdo.
Nidaamka ATS wuxuu si isdaba joog ah u xukumaa xawaaraha tareenada isagoo wata macluumaadka saaran qalabka saaran dusha sare iyadoo la adeegsanayo birlabyo lagu dhejiyay wadada iyo calaamadaha ku xiga.
Difaaca tareenka Automatiga ah (ATP)
Nidaamka ATP waa nidaam badbaado oo soo dhex gala meesha halka darawalka uusan ku dhicin xawaaraha loo baahan yahay ama uusan tareenka joojin doonin si waafaqsan macluumaadka laga helay nidaamka ATS.
Kontoroolka Tareenka otomatiga ah (ATC)
In kasta oo ay la mid tahay nidaamka ATS, haddana waxay hagaajisaa xawaaraha tareenka iyadoo loo eegayo booska tareennada hore iyo gadaal. Si ka duwan nidaamka ATS, furitaanka / xiridda albaabbada iwm. Hawlaha amniga waxaa sidoo kale maareeya ATC.
Sanadihii hore ee nidaamyada tareenka, wax talaabooyin badbaado ah looma baahna sababtoo ah xawaaraha tareenka oo yaraa iyo cufnaanta taraafikada. Amiyane, injineerka amniga. In kasta oo amniga la isku dayay in lagu bixiyo iyada oo la adeegsanayo habka waqtiga waqtiga ee saraakiisha tilmaamaya shilalka shilalka, amniga waxaa la bilaabay in lagu bixiyo habka farqiga masaafada iyo nidaamyada tilmaamida iyada oo ay sii kordhayaan cufnaanta taraafikada.
Isku soo wada duuboo, habka dhexgalka waqtiga ayaa loo adeegsaday sanadihii ugu horreeyay ee nidaamyada tareenka, waxaana xilli dambe la adeegsaday habab kala fogaan, kaas oo lagu bixiyo nidaamyada calaamadaha. Maanta, isticmaalka nidaamyada calaamadaha ayaa u suurtageliyay in si toos ah tareenadu u kaxeeyaan darawal la'aan.
nidaamka ilaalinta tareenka
Nidaamka saxeexa ayaa lagu baari karaa 2 qaybood sida Qalabka Qalabka (Wareegyada Tareenka, Shearsomyada Tooska ah, Nalalka Calaamadaha, Qalabka Isgaarsiinta Tareenka) iyo Qalabka Bartamaha iyo Dhexgalka.
Wareegyada tareenka (ogaanshaha tareenka); Waxaa jira 4 nooc oo Wareegto Xariiqda Aljebrada Go'anka ah, Goobaha Tareenka Xirmay, Meelaha Xirmooyinka Tareenka Axle iyo Wareegayaasha Xariga Xariijinta Dhaqdhaqaaqa.
Goobaha Tareenka ee Go'doonsan ee Aljebra, haddii ay jirto koronto soo laabasho iyadoo loo eegayo korantada laga dalbaday gobolka go'doonsan, ma jiro wax tareen ah oo ka jira gobolka tareenka oo haddii aan lahayn koronto soo noqota, tareen ayaa jira. Waxaa loo malaynayaa in uu jiro tareen halkan haddii ay wax dhacaan.
Wareegyada Tareemada Codsan waxay adeegsadaan inta jeer ee maqalka, iyo isbeddelka calaamadaha micnaheedu waa inuu jiro tareen ku yaal jidka. Adeegsiga nidaamkan masaafada gaagaaban iyo meelaha aan kala go'aynin ayaa aad waxtar ugu leh nabadgelyada iyo qiimaha.
Wareegyada Tareenka oo ay wataan 'Axle Counters' waa nidaamyo bixiya nabadgelyo ayagoo ogaanaya meesha uu tareenka ku jiro tirinta dariiqyada soo galaya kana tagaya tareenka. Isticmaalkooda adduunka si dhakhso leh ayuu u kordhayaa.
Socodka Circuurrada Wadooyinka waxay adeegsadaan baloogyo qaali ah oo dhererkoodu kala duwan yahay iyadoo loo eegayo xawaaraha tareenka, masaafada joogsiga, awoodda bir-qabashada, qalooca iyo ishaarooyinka isgoysyada ee gobolka.
Isticmaalka Nidaamyada Calaamadaha
Aagagga fadhiga iyo aragtida, wadista aragtida ayaa loo istcimaalaa, halka maqasyada iyo aagagga tunelada, nidaamka isku xidhka ayaa loo isticmaalaa go'aaminta gelitaanka iyo bixitaanka tareenka u beddelashada u dhiganta. Nidaamka xiritaanku asal ahaan waa nidaamka quful walba oo tareenka ka baxo tareenka uu tareenka doonayo inuu galo kana hor istaago inuu tareenka soo galo.
Iyadoo la adeegsanayo Nidaamyada wadista ee loo yaqaan 'Automatic Driverless Systems', qodobka bina aadamka oo ah waxa ugu weyn ee shilalka ayaa la yareeyay. Nidaamyadan, shilalka waxaa looga hortagi karaa in si deg deg ah loo ogaado tareennada, iyadoo masaafada sugitaanka ee rakaabka la soo gaabiyey iyada oo la soo sheegayo masaafada u dhaxaysa tareennada iyo wax soosaarka ayaa la kordhiyaa dabacsanaanta sare ee hawlgalka. Nidaamyadan waxay sidoo kale faa'iido u leeyihiin kharashyada dayactirka hooseeya.
Maanta, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo tareenada dhulka hoostiisa mara badanaa waxay isticmaalaan Wadis wadis xirfeed, Gogol wadis toos ah iyo dhaqaajinta nidaamyada calaamadaha wadista gawaarida otomatiga ah.
Ku-meel-gaar ah oo loo yaqaan 'drive block drive'
Guud ahaan 10 daqiiqo. Nidaamkan, oo loo adeegsado masaafooyinka hoose, marinka quseeya ee tareenka waa 10 min. Waxaa sidoo kale loo malaynayaa inay dhammaystirto. Halkaa marka ay marayso, waxay sababi kartaa shilal hadii injineerku safray masaafadan waqti kayar waqtigan. Waqtigan xaadirka ah, Nidaamyada Macluumaadka Mechanic Information (DIS) iyo Nidaamka Raadinta Gawaarida waa in la adeegsadaa.
Wadis go'an oo wadida wadida
In kasta oo ay qiyaastii 20% ka qaalisan yihiin nidaamka wadista wadista ee kor lagu soo sharaxay, waxaa suurtagal ah in khadka loo isticmaalo si ka hufan oo ku kaxaynta otomatiga ah ee tareenka iyo kharashyada tamarta. Maaddaama masaafada la gooyey lagu go'aaminayo inta lagu gudajiro marxaladda naqshadeynta, celceliska celceliska celceliska tareenka waa 2 min. Ku habboon in lagu isticmaalo meelaha ay ku taal.
Nidaamkan, nidaamka isku xidhka ayaa go’aamiya sida dhakhsada uu tareenka u socon doono una dareemayo booska tareenka wuxuuna u sheegayaa tareenka meesha ay tahay in la joojiyo.
Guurista wadista gawaarida otomatiga ah
Sida aan kor ku soo sheegnay, sida ugu dhow ee tareen kasta ugu dhow yahay tareenka hore waxaa loo xisaabiyaa loona kala qaadaa tareenka iyadoo loo eegayo xawaaraha tareenka, awoodda xajinta iyo xaaladda wadada. Goobta tareen walba gooni ayuu u xiran yahay xawaaraha tareen walbana gooni ayaa loo xisaabiyaa. Heerka nabadgelyada awgood, xaraashka waxaa lagu sameeyaa dib uqeybsanaan isgaarsiin laba geesood ah.
Waa maxay Nidaamka Joogtada ah ee Smart?
Waa maxay sababta nidaamka kormeerka elektaroonigga ah?
Balchova Xarumaha Gaadiidka Kabaha
Tirtiridda Mashruuca Gaadiidka
Balcova Silicon Xarumaha Gawaarida Xarumaha
Gaadiidka Sedan aamusnaanta
Mashruuca Tareenka Kacaanka ee Antalya-Kayseri High Speed ​​Silicon
Kukurta Wadada Kukurta
Tirtir Mashruuca Gawaarida Naafada ee Kartepe
Goobaha Tareenka Aljebra ee Go'doonsan
Wareegyada Wadada Tareenka oo ay wataan 'Counle Cirle'
Nidaamka Calaamadaha SIL
Waa maxay Nidaamka Soo-Saarida Tareenka
Nidaamka Saxeexa Tareenka
Waa maxay Nidaamka Saxiixa Waddada
nidaamka isku xidhka
Wareegyada Tareenka ee Codsan
Nidaamyada Macluumaadka Mashiinka
Nidaamka calaamadaha tareenka dhulka hoostiisa
nidaam joojin tareen oo toos ah
Nidaamka Kontaroolka Tareenka otomatiga ah
Nidaamka ilaalinta tareenada ee automatic
Nidaamyada Baabuur wadista ee si buuxda ah
Qalabka Isgaarsiinta tareenka